Cadaynta xanuuka – somali
Qaxaada sambabka waxa lagu cadayn karaa raajada ama x-rayga feedha iyo shaybaadhka xaakada.
Qaaxada sambabka inta badan waxa lagu baadhi karaa qalabka x-rayga ama raajada. Baadhitaanka raajadu ama x-raygu wax dhibaato ah umalaha xaga caafimaadka qofka. Hoyooyinka uurka lehi waa in ay wargeliyaan farsamayaqaanka si loo ogaado xaalad uurkooda intaan raajada la saarin.
Bukaanka xaakadiisa (ama balqanka uu soo qufaco) iyadan waa la shaybaadhaa. Badhitaanka Mikariskoopka ama waynaysada oo lagu eego canduufta si loo helo bakteriyada ku jirta xaakada haddii buaanku uu qabo qaaxada. Beeritaanka xaakada waa muhiim si loo ogaado in ay kujirto bakteriada keenta qaaxada. Haddii loo baahdo badhitaanka degdega ah ee DNA lagu cadaynaayo xanuunka qaaxad.
Ilmaha yari xaakada wuu liqaa markaas lagama helikaro xaako la baadho sida dadka waawayn. Haddii looga shakiyo in uu qabo qaaxada sambabka waxa laga soo qaadi karaa dheecaanka caloosha (tuubo yar ayaa laga gelinayaa sanka kaas oo lugu dhaadhicinaayo caloosha si looga soo qaado dheecaan ay ku jiri karto xaakadii uu liqay) taas oo loo istcimaali karo sida xaakadba loo shay baadho. Waxa lagu fulin karaa baadhitaankan goob isbitaalka.
Waqtiyada qaarkood waxa loo baahanayahay in la isticmaalo qalabka bronkoscopi oo lagu dhaadhiciyo dhuumaha sambabka ama kompuuterka CT oo sambabada lagu sawiro.
Farsamo kala duwan oo baadhisa wax lagu sawiro ayaa loo isticmaala badhitaan qaaxada ee xubnaha kale ee aan sambabada ahayn. Sidoo kale cad ama dheecaan laga soo qaado qaybaha jidhka ee cuduradu gaadheen ayaa lagu sameeyaa shaybaadh.